क्यालेण्डरमा रगत पोतिएको दिन
शहीद आस्थाको विषय हो। अर्थात्, शहीद हुनेहरू आफ्नो विश्वासबाट उद्वेलित भए न कि कसैको आदेशबाट उत्तेजित। आफ्नो विश्वासप्रतिको अविचलित आस्था अर्को अर्थमा सहादत हो।
शाब्दिक रूपमा 'शहीद' इस्लामको पवित्र ग्रन्थ कुरानबाट उत्पत्ति भएको हो, जसको अर्थ धर्मको उद्देश्य पूरा गर्न 'जिहाद' (धार्मिक युद्ध) मा सामेल हुँदै सहादत प्राप्त गर्ने हो।
धन्यवाद राज्य !
निन्दाका लागि पात्र र प्रवृत्तिको कुनै कमी नभएको यो देशमा प्रशंसायोग्य दुर्लभ काम पनि भएका छन् ।
लोकमानले उतारेको लज्जा
लोकमान मात्र होइन, उनलाई उच्च नैतिक र योग्य प्रशासकको वस्त्र पहिर्‍याउनेहरू समेत यतिबेला नग्न देखिएका छन्।
सर्वोच्चको फैसलापछि लोकमान स्वयंमा कति लज्जा वा वस्त्र शेष छ, शायद त्यो उनैले महसूस गरिरहेको हुनुपर्छ। तर असलमा चाहिं, लोकमानसँगै उनलाई उच्च नैतिकवान र योग्य ठहर गरी प्रतिष्ठित संवैधानिक पदका लागि सिफारिश गर्नेहरूको शरीरबाट समेत वस्त्र खसेको हुनुपर्छ।
घूस दिने र लिने शत्रु नभई 'मित्र' बन्न खोज्नुले भ्रष्टाचारले संस्कृतिकै रुप त लिइरहेको छैन भन्ने शंका उब्जिएको छ।
विकासका नाममा भइरहेको अनियन्त्रित शहरीकरण, सवारी चाप र प्रदूषणका कारण काठमाडौंले आफ्नो जीवन्तता गुमाइरहेको छ ।
मास्कले नाक छोप्दै र आँखा मिच्दै बाटो हिंडिरहेका शहरका नरनारी देख्दा लाग्छ, उनीहरू कुनै युद्धमैदानमा छन्, जसले आफ्नो स्वास्थ्य दाउमा राखेका छन् ।
देशलाई नै दिशानिर्देश गर्ने मतादेश पाएको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको दिशाहीनताले दल मात्र होइन मुलुक नै अनिश्चयको भुमरीमा फँस्दैछ ।
प्रहरी कसको साथी
नेपाल प्रहरी जनताको, लोकमानसिंह कार्कीको वा अन्य कुनै शक्तिकेन्द्रको साथी हो? परीक्षण जरूरी छ।
पछिल्ला तीन वर्षमा विधिको शासन र अमनचयनको जिम्मेवारी लिएको प्रहरी कुनै एक व्यक्तिको निहित स्वार्थपूर्तिका निम्ति संस्थागत रूपमै दुरुपयोग भएको प्रशस्त घटना देखिए।
'चोरकै ठूलो स्वर' भने झै पाखण्ड ब्रान्डका असली उपभोक्ताहरू नै नैतिकता, इमान र आदर्शका चर्का कुरा गर्छन्।
अन्तर्यबाट नभएर आवरणबाट छवि निर्माणको नियोजित यत्न नै पाखण्ड हो। पाखण्डीहरू आवरणलाई महत्व दिन्छन्, तर आत्मशुद्धिको झिनो प्रयाससम्म गर्दैनन्। झूट, छल र लोकरिझ्याईं उनीहरूका अस्त्र हुन्।
एउटा असफल कथा
अहंकार र शक्तिको उन्मादले कोही कसरी पतन हुन्छ, यसको पछिल्लो दृष्टान्त बनेका छन्–लोकमानसिंह कार्की ।
ढिलोचाँडो थापालाई सत्तारोहण त गर्नु नै थियो। किनकि, आजको राजनीति महात्मा गान्धी, जयप्रकाशनारायण, राममनोहर लोहिया आदिको जस्तो सत्ता बेगरको भूमिकाबाट मात्र सम्भव छैन। त्यसैले पनि थापालाई सत्तामा जान आवश्यक थियो। तर, थापालाई थाहा हुनुपर्छ, उनको सफलतामा देश उज्यालिएको देख्ने करोडौं आँखा सिंहदरबार नियालिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको विशेष दूत कूटनीतिले विदेशी शक्ति रिझाएर मात्र देश चलाउन सकिन्छ भन्ने कुतर्क सावित गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।
यसै पनि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण आगामी अक्टोबरका लागि पूर्ववर्ती प्रम केपी शर्मा ओलीकै पालामा तय भइसकेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अन्तिम समयमा रद्द भ्रमणलाई वर्तमान सरकारले कूटनीतिक च्यानलबाटै पुनः तय गर्न सक्दथ्यो, जसका लागि दुई छिमेकमा राजदूत पूर्ति गरिनु पहिलो सार्थक कदम हुनसक्थ्यो ।
दाहालको ‘विशेष दूत कूटनीति’ को अन्तर्यमा चीनका लागि आफू उत्तिकै भरपर्दो देखाउने र भारतको विश्वासपात्र बन्ने लालसा देखिन्छ ।
विद्यार्थी नेताको विडम्बना
यदि विद्यार्थी राजनीतिमा उमेर हद नलाग्ने हो भने शासनसत्ता युवाको हातमा आउनुपर्छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।
एकातिर नयाँ पुस्ताले मुलुकको शासनको बागडोर लिनुपर्ने माग छ, अर्कातिर नेतृत्वका लागि लालायित विद्यार्थी भने सम्पूर्ण युवावय नै कलेजको सँघारभित्रै कटाइरहेका देखिन्छन् । ऊर्जाशील समय शैक्षिक प्रतिष्ठानमै सिध्याउने विद्यार्थी नेताहरुले कुन उमेरमा राष्ट्रिय राजनीतिको बागडोर सम्हाल्ने हुन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।
अमेरिका र बेलायतमा ४३ वर्षका व्यक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्छन् । तर, यहाँ भने विद्यार्थी राजनीतिमै भेटिन्छन् ।
एक म्यादी प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुष्पकमल दाहालसमक्ष आफूलाई 'कुनियत नभएका नेता' पुष्टि गर्ने दुर्लभ अवसर प्राप्त भएको छ।
नयाँ सरकारको गठनसँगै नेताहरूमा सरगर्मी बढ्दो छ। मन्त्रिमण्डलमा नियुक्ति पाउने अभीष्टका साथ सांसद्हरू शक्तिकेन्द्र धाएका समाचार आइरहेछन्। तर, जनतामा उदासीनता गहिरिंदो छ। जनता न त ओलीको बहिर्गमनबाट विस्मित छन्, न दाहालको पुनरागमनबाट हर्षित नै।